Madaxweynaha Hirshabeelle oo beeniyay wararka sheegaya inuu aaday Imaaraadka Carabta – Banaadir Times
By banaadir 31st May 2018 167 No comment
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu u aaday dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, halkaasoo horay u tageen Madax ka tirsan maamul goboleedyada dalka.
Madaxweyne Waare ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta oo la tago aanay dambi aheyn, balse howlo u gaar ah u joogo magaalada Nairobi.
Madaxweynayaasha Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhowaan tagay dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, iyadoo socdaalkooda uu ku soo aaday, xilli uu mugdi galay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada.
Hogaamiyihii Hore Ee Hirshabeelle Oo Ka Hadlay Xaaladda Baledweyne Iyo Arimo Kale?
Wafdi ka socda Dowladda oo gaarey degmada Baraawe
Guddiga lagu muransanyahay ee doorashooyinka oo sheegay in Qoorqoor ka codsaday dib u dhigista Jadwalka doorashadda!
Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo gaaray Magaalada Qardho
By banaadir 16th May 2021